Baahida Yurub: Qatar oo si weyn uga faa'iiday dagaalka Ruushka uu ka wado Ukraine - HOBYOMEDIA
Home Uncategorized WARARKA MAANTA Baahida Yurub: Qatar oo si weyn uga faa’iiday dagaalka Ruushka uu ka...
Baahida Yurub: Qatar oo si weyn uga faa’iiday dagaalka Ruushka uu ka wado Ukraine
Maalmo kadib markii uu Ruushka yareeyay gaaska uu ka iibiyo Talyaaniga, ayaa shirkadda Eni ee laga leeyahay dalkaa waxa ay maanta heshiis la gashay dalka Qatar.
Markii uu Ruushka ku duulay Ukraine, dowladda Jarmalka ayaa joojisay mashruuca dhuumaha Nord Stream 2 ee lagu waday in Moscow ay gaaska ku gaarsiiso Jarmalka, ugana sii gudbo Yurub inteeda kale. Arrintaas ayaa dhalisay walaac ah in Yurub ay wajihi doonto gaas yari baahsan.
Qiimaha gaaska ee Yurub ayaa aad sare ugu kacay bilihii la soo dhaafay, waxaana dowladaha uu cadaadis ka soo fuulay qoysaska dakhligoodu hooseeyo.
Yurub ayaa ilaa haatan iibsata shidaalka iyo gaaska Ruushka, inkastoo ay sheegtay inay dhimayso ku tiirsanaanta dalkaas.
Sanadkii la soo dhaafay, kharashaadka ay bixisay dowladda Ruushka ayaa 36% ka yimid dhakhliga tamarta.
Lacagtaas u soo xarootay ayaa inteeda badan waxaa bixiyay Midowga Yurub oo 40% gaaska ka hela Ruushka halka 27% shidaalkana uu ka soo dhoofsado waddankaas.
Madaxa siyaasadda arrimaha dibedda ee ururkaas, Josep Borrell, ayaa dhawaan sheegay in “maalintiiba ay bilyan Euro dhakhli ahaan u siiyaan Ruushka”.
Previous articleXildhibaanada dowlad goboleedkii u horeeyay oo taageeray Raysulwasaare Xamza
Next articleDeni oo Sheegay inu Madaxweyne xasan shiikh nin xun Ku Noqday Balankiina uga Baxay